တာချီလိတ် မယ်ဆိုင် ချောင်းရေကြီးလို့ မြို့ထဲ ရေလွှမ်း - Myanmar Water Portal
လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်တွေက မိုးအဆက်မပြတ် ရွာသွန်းမှု ကြောင့် ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း၊ တာချီလိတ် က မယ်ဆိုင် ချောင်းမှာ ရေကြီး ရေတက် ခဲ့လို့ မြို့ပေါ်က အိမ်တွေ ရေနှစ်မြုပ် မှု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အိမ်ထောင်စု ပေါင်း ခုနှစ်ရာကျော် နဲ့ အိမ်ခြေ စုစုပေါင်း ၆၃၂ အိမ် ထိခိုက် ပျက်စီး ခဲ့ရကြောင်း တာချီလိတ် ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးတင်ဝင်းရွှေက ဘီဘီစီ ကို ပြောပါတယ်။
ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု များပေမယ့် လူထိခိုက် သေဆုံးမှု တော့ မရှိဘူးလို့ သူက ပြောပါတယ်။
ဩဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့ မှာ မြန်မာ - ထိုင်း နယ်စပ်၊ မယ်ဆိုင်ချောင်းရေ တိုက်စားမှု ပြင်းထန်တဲ့ အတွက် ချစ်ကြည်ရေး အမှတ်(၁) တံတား နဲ့ ချောင်းဘေးက အုတ်တံတိုင်း လည်း ပြိုကျ ခဲ့ရပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် ရေကြီးရေလျှံမှု တွေ ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ် လာနိုင်တဲ့ အတွက် ဩဂုတ်လ(၁၉)ရက်နေ့ ညတွင်းချင်းမှာပဲ အချိန်မီ ယာယီ ရေတား တွေ လုပ် ပေးခဲ့ရပါတယ်။
နှစ်နိုင်ငံ က လယ်ယာ စိုက်ပျိုးသူ တွေကလည်း စိုက်ပျိုးရေး ရရှိဖို့ အတွက် မယ်ဆိုင် ချောင်းထဲမှာ ရေတား တမံ တွေ အပြိုင် အဆိုင် ဆောက်လုပ် လေ့ ရှိတာကြောင့် ရေစီး ရေလာ ကလည်း အမြဲလိုလို ပြဿနာ ဖြစ်လေ့ ရှိပါတယ်။
အဲဒီ ရေစီး ပြောင်းဖို့ တာတမံ ဆောက်နေတာတွေကို ဖျက်သိမ်းရေး ကိစ္စ ကိုလည်း ထိုင်း နိုင်ငံက တာဝန်ရှိသူတွေ နဲ့ ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်တယ်လို့ ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးတင်ဝင်းရွှေက က ပြောပါတယ်။
Burmese Articles General News
Vacancy Announcement - Environment Safeguard Specialist
Ecosystem Services Drinking Water Dams & Bridges Flooding Urban Development Water Quality Integrated Water Resources Management Waste Water Waterways Inclusive Development
Myanmar Water Portal createdanew blog post, Myanmar shorebirds get four-fold expansion in protected wetland
​3 April 2020 - Source: BirdLife International - One of Asia's most important shorebird sanctuaries has just quadrupled in size thanks to years of advocacy from our Myanmar Partner. Here's how they connected insight with action to help birds on the brink and the people who live alongside them.By Ding Li Yong Twenty years ago, few conservationi...
Myanmar Water Portal createdanew blog post, Fluvial Remote Sensing for Science and Management(PDF)
​Source: P-GIS - This book offersacomprehensive overview of progress in the general area of fluvial remote sensing withaspecific focus on its potential contribution to river management. The book highlightsarange of challenging issues by consideringarange of spatial and temporal scales with perspectives fromavariety of disciplin...
Myanmar Water Portal createdanew blog post, ကာဗွန်လျော့ချနိုင်မည့် စီးပွားရေးကိုအားပေးသော အမျှော်အမြင်ရှိသည့် ရေစီမံခန့်ခွဲမှု
ပါရီသဘောတူညီချက်သည် ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကို ၂ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်တွင် ဆက်လက်ရှိနေစေရန်နှင့် ၁.၅ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် အထိကန့်သတ်ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအတွက် ကြုံတောင့်ကြုံခဲ အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် လျော့ချသည့်စီးပွားရေးကို ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်စေမည့် အဓိက‌ကျသော ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပါရီသဘောတူညီချက်၏ ရည်မှန်းချက်များကို နိုင်...